Goob Joogeyaasha Caalamiga ah Oo Warbixin Ka Soo Saaray Cod Bixintii Doorashadda Madaxtooyadda Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Goob Joogeyaasha Caalamiga ah Oo Warbixin Ka Soo Saaray Cod Bixintii Doorashadda Madaxtooyadda Somaliland
Hargaysa (SDWO): Goob joogeyaashii kor meerayay doorashadii madaxtooyadda Somaliland ee shalay dalka ka qabsoontay ayaa ka hadlay qaabkii ay doorashadaasi u dhacday, iyagoo Somaliland ku hambalyeeyay sidii ay doorashadu u dhacday.
Xubnahan goob joogeyaasha ah oo tiradoodu gaadhaysay 27 ruux oo galabta shir jaraa’id ku qabtay hudheelka Maansoor ee magaaladda Hargaysa, waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu si nabadgelyo ah u dhacday.
Goob joogeyaasha ayaa waxyaabihii ay ku soo arkeen qaabkii doorashadu u dhacday waxay ka soo saareen war-saxaafadeed ay ku faahfaahiyeen warbixintoodda hor dhaca ah:
Waxaanay u dhignayd sidan: Iyadoo laga dab qaadanayo doorashadda saddexaad ee madaxtooyadda oo dhacday 13-ka November 2017-ka, waxa Hargaysa si rasmi ah u soo wada gaadhay 60 xubnood oo ah goob joogeyaasha caalamiga ah oo ay maalgelisay dawladda Ingiriisku, kuwaasoo ka kala yimid 27 wadan.
Waxay imika dhamaystirayaan warbixintii hor dhaca ahayd oo ay u gudbinayaan guddida doorashooyinka qaranka qaranka, iyadoo goob joogeyaashiina ay Hargaysa ku soo noqonayaan.
Dr. Michael Walls oo ka tirsan qaybta horumarinta ee jaamacadda UCL, kana mid ah Somaliland Focus waxa uu yidhi “Maalintii doorashadda, waxa aanu aad ugu faraxsanahay in aanu u soo taagnayn doorasho guud ahaan koobsatay habkii loo marayay doorashooyinka.
Annagoo ogsoon in ay jiraan walaacyo aan la yaraysan Karin, haddana kuwaasi ma aha qaar wax u dhimaya geedi socodkii guud ee doorashadda, isla markaana waxaanu Somaliland ugu hambalyaynaynaa guud ahaan habka nabadgelyadda ah ee ay doorashadu u dhacday, waa tallaabo hore loogu qaaday dhanka kacaanka doorashooyinka”.
Maalintii codaynta, goob joogeyaashu waxay ka markhaati ahaayeen nidaamkii furitaanka, codaynta iyo xidhitaanka cel celis ahaan 350 goobood dhamaan lixda gobol ee Somaliland, sidoo kalena habkii tirinta codadka ayay iyadana arkeen.
Dadka codbixiyeysha ahi sida badan waxay u codaynayeen iyada oo wax carqalad ahi aanay ka hor imanayn. Goob joogeyaasha gudaha iyo wakiiladda xisbiyadu way joogeen waxa aanay si habsami leh u wateen hawshooda, iyadoo wax carqalad ah aanay la kulmayn inta badan goobaha codbixinta ee la booqday. Inkastoo aanu ognahay in ay jireen in mararka qaar ay dhacday in goobjoogeyaal loo diiday in ay galaan goobo codbixineed ama lagu amray in ay ka baxaan.
Waxa aanu sidoo kale la soconnaa tiro arrimo kale oo dhawr ah oo ay ka mid tahay sheegashooyin in dad da’doodu yar tahay ay codeeyeen, in si nidaamsan sirtii codaynta laga saaray marka la eego dadka u baahnaa in laga caawiyo codaynta, in shuruucda aan si isku mid ah loo raacayn mararka qaarkood (marka lagu dari tirinta codadka lagu murmay) iyo joogitaanka iyo soo faragelin mararka qaarkood ka imanaysay ciidamadda amaanka ee qaar ka mid ah goobaha la booqday, in kasta oo goobjoogayaashu aanay arkin cabsi gelin baahsan.
Xaddidaadda ay xaddidnayd aqoonta doorashadda ee dadka loo gudbiyay ayaa laga yaabaa in ay raad ku lahayd cod bixinta iyada oo cod bixiyeyaashu ay u muuqdeen qaar aan hubin sida loo codaynayo, goobjoogayaashu waxa ay hoosta ka xarriiqeen warbixino sheegaya carqalado, tusaale ahaan sababay in la joojiyo cod bixinta magaaladda Badhan ee bariga Somaliland.
Guud ahaan goob joogeyaashu waxa ay qiimeeyeen awoodda xirfadeed iyo hab-dhaqanka shaqaalaha doorashadda oo guud ahaan ahaa mid wanaagsan, waxa aanu Somaliland ku hambalyaynaynaa qabashadda doorasho guud ahaan ahayd mid si nabagdleyo ah ku dhacday, isla markaana si wanaagsan loo nidaamiyay.
Goobjoogayaashu waxa ay soo saari doonaan warbixintoodda kama danbaysta ah qaybta hore ee sanadka 2018-ka.